सुनिता लामिछाने - कान्तिपुर समाचार
म सानी छँदा सुन्ने गर्थें, हाम्री छिमेकी आमै आफ्ना छोरालाई जति बेलै पढ्न कर गरिरहनुहुन्थ्यो । छोराले अटेर गरे रिसाउँदै भन्नुहुन्थ्यो, ‘पढे पढ्, नपढे नपढ् ! पढिस् भने तेरी स्वास्नी मास्टर्नी हुन्छे ।’ छोरो पढेर मास्टर बनिदिए आफ्नालागि सर्वस्व हुने आमैको आशय थियो ।
केही दिन अगाडि राजधानीबाट करिब ३५ कि.मि. पूर्वको एउटा सामुदायिकविद्यालय भ्रमण गरें । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण गाउँको बीच थियो विद्यालय । २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएको भवन पुनर्निर्माण भइरहेको थियो । कति बनिसकेका थिए ।
सुनिता लामिछानेका लेखहरु :